“सुलोचनाको उपेन्द्र यादवलाई खुल्लापत्र! शेयर गरि उहाँ सम्म पुर्याईदिनुस्।:: Mero Desh
“सुलोचनाको उपेन्द्र यादवलाई खुल्लापत्र! शेयर गरि उहाँ सम्म पुर्याईदिनुस्।
Published on: १ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०४:२९
काठमाण्डौ सुलोचनाको उपेन्द्र” यादवलाई खुल्ला पत्र!जनकपुर निवासी (हाल काठमाण्डौ) सुलोचना खतिवडाले फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई लेखेको खुल्ला पत्र जो हाल अनलाइन मिडियाहरुमा भाइरल बनेको छ, सबैले एक पटक पढौ धेरै भन्दा धेरै शेयर गरौं है। उनले मन छुने (मर्मस्पर्सी) पत्र जो आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै लेखे की छन र पढेर प्रतिक्रिया पनि लिनुहोला।
श्री उपेन्द्र यादव ज्यु, अध्यक्ष, संघीय समाज’वादी फोरम” नेपाल ।यतिवेला तपाईं भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली जानु भएको थाहा भएपछि केही नलेखि चित्त नबुझेर यो पत्र लेख्दै छु । म जनकपुर पढेर हुर्किने अवसर पाएकिले पनि केही हदसम्म मधेसी समाजलाई पढ्ने र बुझ्ने मौका पाएको यहाँलाई जानकारी गराउँछु” ।
“मधेसी जनताको पीडा, उनीहरुको भावना र राष्ट्रवादलाई मैले धेर–थोर छामेकी पनि छु । जन’तालाई दोष दिन ठाऊँ कहिं पनि देखेकी छैन केही दिन अघिको एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा तपाईंले मधेसीहरु सर्वोच्च स्थानमा पुग्ने ढोका राज्यसत्ता क’ब्जा गरेर बस्ने ख’सहरुले बन्द गरेको अभि ब्यक्ति दिंदा म छक्क परें ।
संझें पहिलो राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवलाई। पहिलो उप राष्ट्रपति परमानन्द झा पनि संझनामा आइपुगे’ त’त्कालीन सभामुख सु’वासचन्द्र नेम्वाङ,र” तत्कालीन उप’सभामुख ओनसरी घर्ती,प्रधानन्यायाधीस रामकुमारसाह आदि आदि नाम र अनुहार झल्झली ताजा भएर आए । यी मध्ये कुन चाहिं ख’स जातीका थिए ? मैले भेउ पाईंन ।
तपाईं उपप्रधानमन्त्री’ परराष्ट्रमन्त्री हुनु भएकै हो मधेसी नेताहरु उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । गृहमन्त्रालय पनि मधेसी नेताले चलाईसकेका छन् ।राजेन्द्र महतो शरतसिंह भण्डारी विजयकुमार गच्छदार’लगायतका नेता कतिपटक मन्त्री भए भन्ने गणना त सायद हुनेहरुलाई पनि गाहे होला
“सत्तामा छँदा तपाईंहरुले मधेसी जनताको पक्षमा के काम गर्नु भयो ? यो मेरो प्रश्न” होइन । संसद र क्या’विनेटमा के कस्ता मुद्धा दर्ता गर्नु भयो ? सायद मलाई मात्र होइन, कसै लाई पनि थाहा छैन । सुनेको छु,सम्माननीय प्रथम राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवलाई तपाईंहरुले कहिल्यै मधेसी मान्नु भएन रे ! मेरो प्रश्न छ।
, तपाईंको नजरमा मधेसी हुन के हुनुपर्छ ?कांग्रेस, एमाले, माओवादी,राप्रपा लगायतलाई भोट दिने सत्तरी प्रतिसत मधेसी जनतालाई तपाईं मधेसी मा’न्नु हुन्छ कि हुन्न राष्ट्रिय पा’र्टीमा रहेर मधेसका मुद्धामा सक्रिय नेताहरुलाई तपाईं को भन्नु के छ ? तपाईंहरुको यस्तो मा”नसिकताका वीच पहाडी मुलका मधेसीहरुको विषय झिक्ने मैले औ’चित्य ठानिनँ ।
तपाईले समेत नेतृत्व गर्नु “भएको मधेसी मो”र्चाले मधेस आन्दोलनमा स’हिदहुनेलाई ५० लाख दिने निर्णय गरेको संझिदा म अवाक हुन्छु । आ’तंककारी संस्थाले मात्र गर्ने यस्तो निर्णय कुन न्यायको सि’द्धान्तमा पर्छ ? ४८ जना सहिद भइसकेका छन् आन्दोलनमा। प्रश्न छ,त्यो ५० लाख रुपैयाँ उनीहरुको परिवारलाई कहिले दिने होला ?
कहाँवाट दिने होला ? आम मधेसी जनता अत्यन्तै शोषित छन् र पीडित छन् ।तपाईं कम्युनिष्ट पार्टीवाट राज”नीति सुरु गर्नु भएको भनेपछि मा”क्सवाद पढेकै हुनुपर्छ माक्र्स वाद पढेपछि तपाईंले जातीय र क्षेत्रीय नारा कति घा’तक हुन्छ भन्ने पनि बुझेको हुनुपर्छ । के मधेसी जनताहरु भित्र सामन्ती छैनन्” ?
“स्मरण गराउन चाहान्छु, ४८ जना सहिद हुँदा नाम चलेका ब्यक्ति एकजना पनि परेका छैनन् । अगुवा कार्यकर्ता समेत छैनन् । यसको अर्थ के हो ? तपाईंले कैलाली पुगेर त्यहाँ का जनतालाई भन्नुभएको थियो, खु”कुरी, खुँ डा, भा ला लिएर जनता स’डकमा निस्कनुस्। त्यसको केही दिन पछि तपाईंले भनेझै ह’तियार बो केर सडकमा मान्छेको हुलहरु देखियो ।
“त्यस हुलले पा’सविक ढंगले सुरक्षाकर्मीको ज्यान लियो । आफूले गरेको अनुरोध मानेर हुल निस्कियो ।र,तपाईंको” इ’सारा बुझे जस्तो गरेर दा”नवी शैलीमा प्र’हरीहरु मारिए अब अहिले मधेसका हरेक आ”न्दोलनमा ल’ठ्ठी र घ रेलु ह’तियार प्रयोग भए:को देखिन्छ । के शान्तिपूर्ण आन्दोलन यही हो ?
“कार्य कर्तालाई ह’तियार बोकाएर आ”न्दोलन गराए पछि राज्य ले गो’ली ठोक्छ भन्ने सा:मान्य ज्ञान पनि त’पाईंमा देखिएन । भा’रतका गृ’हमन्त्री रा’जनाथ सिंहले १ करोड भा:रतीय नेपालमा छन् भनेर घोषणा गरे । अर्का एकजना सांसदले मधेसका १६ जिल्ला खो’सर पनि भारतले लिनु पर्छ भने ।
भारतीय सुरक्षाक”र्मी नेपाल पसेर ४ जनालाई गोली ठोके भा”रतीय राज’दुतले अर्नगल विज्ञप्ती निकालेर ढाँट–छल गरिरहेका छन् । तर, यी सव दृश्य’मा तपाईंहरुको समर्थन र मौन सम’र्थन देख्दा भक्कानो फुटेर आउँछ । किन तपाईं हरु यसरी लम्प”सार पर्दै हुनुहुन्छ ?उपेन्द्र जी,सोच्नु भएको छ ?
तपाईंको पार्टी लाई जनताले चुनावमा किन मरिचझैं चाहुरि पारि दिएका होलान् ।किनभने मधेसका आम जनता राष्ट्र वादी छन् । भारतले सीमानामा ज्याजती मच्चाउँदा आँसु झारेर पहिला रुने मधेसी नै हुन्छन् । देश र जनताले आफू लाई यस्तै ठाऊँमा तौलिने हो भन्ने पनि तपाईंले बुझ्न सक्नु भएन ?
तर,आ”न्दोलनले पार्टी को है”सियत बढाउँछ भन्ने ज्ञान र हेक्का चाहिं तपा”ईंमा बढी नै देखिन्छ अब एजेन्डा विहीन आन्दोलन हुँदैन । पहिला तपाईंको माग एक मधेस एक प्रदेश थियो । र अहिले आएर थारु”हरुको भिन्न राज्यको माग पनि थप्नु भएको छ । प्रदेश नं २ जनकपुरको भेटीले चल्दैन भनेर तपाईंले मधेसमा।
“आम्दामीको स्रोत पनि खोज्दै हुनुहुन्छ । अशोक राईको पार्टीसँग मिसिनु भएको छ, राष्ट्रिय पार्टी हुन् । तर राष्ट्रिय पार्टीको अ”ध्यक्ष जसरी प्रस्तुत हुन सक्नु भएको छैन । र मधेसको कुरागर्दा आदिवासी, जनजातीको सवालमा चुप हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय नेता हुन सवैका माग बोक्न सक्नुपर्छ कि पर्दैन ? र, मागमा एकरुपता हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
“संविधानसभा र संसद वहिष्कारको निर्णय गर्नु भयो तर, प्रधानमन्त्रीको चुनावमा भने भाग लिनु भयो र कां”ग्रेसका सुशील कोइरालाई भोट हाल्नुभयो । यसको अर्थ के हो ? को’इरालाले चुनाव जितेको भए तपाईंहरु मन्त्री मण्डलमा भाग लिनुहुन्थ्यो ?अर्को कुरा, तपाईंहरुले भनेको संविधान संसोधन गर्न ।
कांग्रेस एमालेको एकता भत्काएर संभव छ यो आन्दोलन लाई मधेसी जनताको अधिकारकोलागी भन्दा स’त्तारोहण को लागी हो भनेर लाज’लाग्नेगरी नदे’खाएको भएनै बेश” हुने थियो । नेता ‘गो’टी’ होइन, ‘स्ट्रा’इकर’ हुनसक्नु पर्छ । तपाईंलाई लागेको होला, दिल्लीले म’धेसी जनताको भाग्य र भविश्य वनाइदिन्छ ।
“यो भ्र”मवाट तपाईंहरु ब्यूँझिदा सम्म दि’ल्लीले कोशी र कर्णालीमा एका’धिकार जमाइसक्ने छ । नेता ‘गो’टी’ हुँदा को परिणा म स’म्पूर्ण जनता र देशले भोग्नु परो भने त्यो भन्दा दुखद अर्को हुँदैन ।के यो यथार्थप्रति तपाईं जानकार हुनुहुन्छ ?भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजले मधेसका मु’द्धाहरु.
“नसु’ल्झिएसम्म सीमा अवरोध सहज नहुने कुरा तपाईंहरु लाई पनि भनेर आस्वस्थ पारिदिएकी छन् । तर तपाईं भन्नु हुन्छ, ‘आन्दोलन हामीले गरेको हो । नाकाबन्दी हामीले गरेको हो ।’ शीर्ष नेताहरुवीचको वार्ता छोडेर भारतीय दुताबास र दिल्ली गुहार्न जाँदा भने बिडम्बना नै लाग्छ ।
“ठिकै छ, नाकाबन्दी तपाईंहरुले नै गरेको हो । तर, पैसा वाला र भिआईपीलाई नाकाबन्दीले छुन सकेको छैन र छुने पनि छैन । दु:ख त विचरा जनताले पाएका छौं । ‘के नाकाबन्दीको अर्थ यही हो’ ? मैले बुझ्न नसकेको प्रश्न के हो भने ‘यो नाकाबन्दी कस्कोलागी हो’ ? बिन्ती छ, हरेक
‘रा”जनीतिक कदम चाल्दा वा भाषणगर्दा नेपाल र नेपाली जनतालाई संझेर छातीमा हात राखेर गर्नुहोला ।इतिहास ले धिक्कार्ने पात्र नबन्नु होला किनभने तपाईं मधेसले आश गरेको नेता’मा पर्नु हुन्छ। यहाँ भन्दा बढि के भन्नु यो भन्दा धेरै तपाई जानकार हुनुहुन्छ। हस्त नमस्कार धन्यवाद।सुलोचना खतिवडा काठमाण्डौ साभार सञ्जालबाट